ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်း.... မန္တလေးရဲ့မြောက်ဘက်မှာ ရွှေကြောအသစ်ကြီး တခုပေါ်ပါတယ်…. - ThutaSone
ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်း…. မန္တလေးရဲ့မြောက်ဘက်မှာ ရွှေကြောအသစ်ကြီး တခုပေါ်ပါတယ်….
November 11, 2019 ThutaSone သတငျးစုံ 0
မန္တလေးရဲ့မြောက်ဘက်မှာ ရွှေကြောအသစ်တခုပေါ်ပါတယ်.ကြီးလားသေးလားဆိုတာတော့ နောက်မှ သိရမှာပါပဲ..ရွှေကြောတွေ့တော့ ဒေသခံတွေတူးကြဆွကြ..ကျင်ကြ.ရွှေချက်ကျပေါ့..ဘယ်နားလဲဆိုတော့ မန္တလေးမတ္တရာလမ်းကျောအတိုင်းသွားလိုက်ရင် လမ်းတဝက်လောက်မှာ ကျောက်တံတားရွာဆိုတာရှိတယ်.အဲဒီကနေ အပေါ်ကို ထောင်တက်သွားရင် ကင်းရွာ.ကင်းရွာကနေ အရှေ့ဘက်စွန်းစွန်းကို နာရီဝက်လောက်သွားရင်ရောက်ပြီ..
လူအများသိပြီးသားနေရာတခုနဲ့ ညွှန်းရမယ်ဆိုရင် လက်ရှိပြသနာတက်နေတဲ့ အောင်သပြေကျေးရွာဘေးကအယ်လ်ဖာဘိလပ်မြေစီမံကိန်းမြောက်ဘက် ၅မိုင် ၆မိုင်အကွာပေါ့ဒေသခံတွေလက်ရှိတူးနေတာတွေက အစိုးရဆီက တရားဝင်လုပ်ကွက်လျှောက်ပြီးတူးတာတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ဒေသခံတွေ စမ်းတဝါးဝါးနဲ့တူးနေတဲ့ပုံပါပဲ..ဒေသခံတွေတူးတာကို ဘာမှကန့်ကွက်စရာမရှိဘူး.သူတို့အဆင်ပြေတာ ဝမ်းသာပါတယ်
.ပြသနာက အဲဒီမှာ တရုတ်တွေဝင်တူးနေတာပဲ…မြန်မာနိူင်ငံရဲ့ အရေးကြီးတဲ့သယံဇာတတွေကို အခုလို တရုတ်တွေ တံခါးမရှိ.ဓားမရှိ ဝင်လုပ်နေကြတဲ့အပေါ် ဒေသအာဏာပိုင်တွေဟာ ဘာမှကို မသိကြတာလား.ဒါမှမဟုတ် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြတာလားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်ရပါတော့မယ်.
ဒေသခံတွေဆီက သိရသလောက်တော့ လောလောဆယ် တရုတ်တွေဝင်တူးနေတဲ့ ရွှေကျင်းနှစ်ကျင်းရှိတယ်..ရွှေဘယ်လောက်ထွက်တယ်.မထွက်ဘူးဆိုတာတော့ မသိရသေးဘူး..တရုတ်တယောက်တူးတာက မြေကြီးအောက်ဒေါင်လိုက်ဖောက်တဲ့ လေးပေတွင်း.နောက်တယောက်တူးတာကတော့ မိုးထိမိုးမိဘက်မှာတူးတဲ့ပုံစံနဲ့ဆင်တယ်…မြေကြီးအောက်ဒေါင်လိုက်မသွားပဲ တောင်ဂမူကို ဘေးတိုက်ခပ်ပြေပြေနဲ့ တူးထားတာ ပေနှစ်ဆယ်လောက်တော့ပေါက်ပြီးပြီ.
.ဒေသခံပြည်သူက အဲဒီလိုတရုတ်တွေ ဝင်တူးတာကိုမကျေနပ်လို့ မီဒီယာကိုသတင်းပေးတယ်..မီဒီယာကနေ သတင်းစာမှာ ဖော်ပြထားတယ်..အဲဒီကိစ္စကို တာဝန်ရှိသူတွေ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပဲ
..အောင်သပြေရွာသားတွေ ၂၀၁ရက အဲဒီစီမံကိန်းရှိတဲ့တောင်တွေထဲမှာ ရွှေထွက်တယ်လို့ပြောဖူးတယ် လက်ရှိအခြေအနေအရ အဲဒါဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ယူဆပါတယ်
အရင်အစိုးရဝန်ကြီးတပါးဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်မင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့အစိုးရက တရုတ်ကို ကြောက်ရပါတယ်လို့ တရားဝင်ဝန်ခံထားတယ်.ကဲ..ဒီအစိုးရကရော ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာ..လမ်းပြင်..တံတားဆောက်..အခွန်ကောက်တာလုပ်နေရုံနဲ့ အစိုးရတာဝန်ကုန်ပြီလို့ ထင်မနေပါနဲ့ခဗျား…
credit Min Soe
မန်တလေးရဲ့မွောကျဘကျမှာ ရှကွေောအသဈတခုပျေါပါတယျ.ကွီးလားသေးလားဆိုတာတော့ နောကျမှ သိရမှာပါပဲ..ရှကွေောတှတေ့ော့ ဒသေခံတှတေူးကွဆှကွ..ကငျြကွ.ရှခေကျြကပြေါ့..ဘယျနားလဲဆိုတော့ မန်တလေးမတ်တရာလမျးကြောအတိုငျးသှားလိုကျရငျ လမျးတဝကျလောကျမှာ ကြောကျတံတားရှာဆိုတာရှိတယျ.အဲဒီကနေ အပျေါကို ထောငျတကျသှားရငျ ကငျးရှာ.ကငျးရှာကနေ အရှဘေ့ကျစှနျးစှနျးကို နာရီဝကျလောကျသှားရငျရောကျပွီ..လူအမြားသိပွီးသားနရောတခုနဲ့ ညှနျးရမယျဆိုရငျ လကျရှိပွသနာတကျနတေဲ့ အောငျသပွကြေေးရှာဘေးကအယျလျဖာဘိလပျမွစေီမံကိနျးမွောကျဘကျ ၅မိုငျ ၆မိုငျအကှာပေါ့
ဒသေခံတှလေကျရှိတူးနတောတှကေ အစိုးရဆီက တရားဝငျလုပျကှကျလြှောကျပွီးတူးတာတော့ မဟုတျသေးပါဘူး။ဒသေခံတှေ စမျးတဝါးဝါးနဲ့တူးနတေဲ့ပုံပါပဲ..ဒသေခံတှတေူးတာကို ဘာမှကနျ့ကှကျစရာမရှိဘူး.သူတို့အဆငျပွတော ဝမျးသာပါတယျ
.ပွသနာက အဲဒီမှာ တရုတျတှဝေငျတူးနတောပဲ…မွနျမာနိူငျငံရဲ့ အရေးကွီးတဲ့သယံဇာတတှကေို အခုလို တရုတျတှေ တံခါးမရှိ.ဓားမရှိ ဝငျလုပျနကွေတဲ့အပျေါ ဒသေအာဏာပိုငျတှဟော ဘာမှကို မသိကွတာလား.ဒါမှမဟုတျ မသိခငျြယောငျဆောငျနကွေတာလားဆိုတာ မေးခှနျးထုတျရပါတော့မယျ.
ဒသေခံတှဆေီက သိရသလောကျတော့ လောလောဆယျ တရုတျတှဝေငျတူးနတေဲ့ ရှကေငျြးနှဈကငျြးရှိတယျ..ရှဘေယျလောကျထှကျတယျ.မထှကျဘူးဆိုတာတော့ မသိရသေးဘူး..တရုတျတယောကျတူးတာက မွကွေီးအောကျဒေါငျလိုကျဖောကျတဲ့ လေးပတှေငျး.နောကျတယောကျတူးတာကတော့ မိုးထိမိုးမိဘကျမှာတူးတဲ့ပုံစံနဲ့ဆငျတယျ…မွကွေီးအောကျဒေါငျလိုကျမသှားပဲ တောငျဂမူကို ဘေးတိုကျခပျပွပွေနေဲ့ တူးထားတာ ပနှေဈဆယျလောကျတော့ပေါကျပွီးပွီ.
.ဒသေခံပွညျသူက အဲဒီလိုတရုတျတှေ ဝငျတူးတာကိုမကနြေပျလို့ မီဒီယာကိုသတငျးပေးတယျ..မီဒီယာကနေ သတငျးစာမှာ ဖျောပွထားတယျ..အဲဒီကိစ်စကို တာဝနျရှိသူတှေ ဘယျလိုကိုငျတှယျမလဲဆိုတာတော့ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပဲ
..အောငျသပွရှောသားတှေ ၂၀၁ရက အဲဒီစီမံကိနျးရှိတဲ့တောငျတှထေဲမှာ ရှထှေကျတယျလို့ပွောဖူးတယျ လကျရှိအခွအေနအေရ အဲဒါဖွဈနိုငျခွရှေိတယျလို့ယူဆပါတယျ
အရငျအစိုးရဝနျကွီးတပါးဖွဈတဲ့ ဦးအောငျမငျးကတော့ ကြှနျတျောတို့အစိုးရက တရုတျကို ကွောကျရပါတယျလို့ တရားဝငျဝနျခံထားတယျ.ကဲ..ဒီအစိုးရကရော ဘာလုပျမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပေါ့ဗြာ..လမျးပွငျ..တံတားဆောကျ..အခှနျကောကျတာလုပျနရေုံနဲ့ အစိုးရတာဝနျကုနျပွီလို့ ထငျမနပေါနဲ့ခဗြား…
ငွေကံမပွင့်သူများလာဘ်ပိတ်ပြီး စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် ဆောင်ရွက်ရန် ဒါနအဓိဋ္ဌာန်